Bit By Bit - Ny fandinihana ny fitondran-tena - 2.3.2.1 tsy feno
Na dia "lehibe" ny "lehibe angona" izany mety tsy manana ny fampahalalana tianao.
Angon-drakitra lehibe indrindra loharanom-baovao dia tsy feno, amin'ny heviny hoe tsy manana ny vaovao fa ho tianao noho ny fikarohana. Izany no tena mampiavaka ny tahirin-kevitra izay natao ho an'ny tanjona hafa ankoatra ny fikarohana. Maro ny mpahay siansa ara-tsosialy no efa nanana ny traikefa rehefa mifandray amin'ny ny incompleteness, toy ny efa misy fanadihadiana izay tsy hanontany ilay fanontaniana tianao. Indrisy anefa, ny zava-manahirana ny incompleteness mirona ho lehibe kokoa eo amin'ny tahirin-kevitra tafahoatra. Raha ny zava-nitranga, angon-drakitra lehibe mazàna ny tsy ampy telo karazana fanazavana ilaina ho an'ny fiaraha-monina fikarohana: Ny Mponina sy ny fitondran-tena eo amin'ny sehatra hafa, ary ny angon-drakitra mba operationalize teorika constructs.
Telo ireo endrika incompleteness dia aseho ao ny fanadihadiana nataon'ny Gueorgi Kossinets sy Duncan Watts (2006) momba ny fivoaran'ny tambajotra sosialy amin'ny oniversite. Kossinets sy Watts nanomboka tamin'ny hazo ny mailaka avy amin'ny oniversite, izay nisy fanazavana marina momba izay naniraka mailaka izay amin'ny firy (ny mpikaroka dia tsy afaka mampiasa ny afa-po ny mailaka). Mailaka ireo firaketana an-tsoratra toy ny mahagaga toa dataset, nefa, izy ireo na dia eo aza ny habeny-granularity-ifotony sy ny tsy feno. Ohatra, ny mailaka tsy ahitana hazo angon-drakitra momba ny isan'ny mponina toetra ny mpianatra, toy ny lahy sy ny vavy sy ny taona. Ankoatra izany, ny hazo mailaka tsy ahitana vaovao momba ny fifandraisana amin'ny alalan'ny haino aman-jery hafa, toy ny antso an-tariby, SMS, na face-to-tava resaka. Farany, ny mailaka hazo tsy mivantana ahitana vaovao momba ny fifandraisana, ny ara-constructs maro efa misy teoria. Taty aoriana ao amin'ny toko, rehefa miresaka momba ny fikarohana paikady, ianao mahita ny fomba sy Watts Kossinets namaha ireo olana ireo.
Telo karazana incompleteness, ny olana ny tsy feno angon-drakitra mba operationalize teorika constructs no sarotra ny hamaha, ary ao ny zava-nitranga, dia matetika no tsy nahy ninia tsy nijery ny angon-drakitra mpahay siansa. Teny mafy, teorika constructs dia saro-takarina hevitra ny mpahay siansa ara-tsosialy mandalina, nefa, indrisy, ireo tsy afaka foana constructs ho unambiguously faritana dia norefesiny. Ohatra, aoka ny sary an-tsaina miezaka ny empirically hitsapa ny toa filazana tsotra fa ny olona izay marani-tsaina kokoa ny hahazo vola bebe kokoa. Mba hizaha toetra filazana izany ianao, dia mila handrefy "faharanitan-tsaina." Kanefa, inona moa tsaina? Ohatra, Gardner (2011) nilaza fa misy raha ny marina valo endrika samihafa ny faharanitan-tsaina. Ary, moa ve misy fomba fiasa mety tsara handrefy misy ireo endrika ny faharanitan-tsaina? Na dia eo aza be dia be ny asa amin'ny alalan'ny psikology, ireo fanontaniana ireo mbola tsy manana valiny Mazava be. Noho izany, na dia somary tsotra fitarainana-olona izay marani-tsaina kokoa ny mahazo vola bebe kokoa, dia mety ho sarotra ny hanombana empirically, satria mety ho sarotra ny operationalize teorika constructs ao amin'ny tahirin-kevitra. Hafa ohatra ny teorika constructs izay tena zava-dehibe, fa sarotra ny operationalize ahitana ny "fenitra," "Renivohitra ara-tsosialy," sy ny "demokrasia." Mpahay siansa ara-tsosialy miantso ny lalao eo teorika constructs sy ny angona Manambatra kery (Cronbach and Meehl 1955) . Ary, tahaka izany dia toa manondro lisitry ny constructs, hanorina kery dia olana fa ny mpahay siansa ara-tsosialy efa niady mafy tamin'ny ho ela be, na dia izy ireo miara-miasa amin'ny tahirin-kevitra izay voaangona noho ny antony ny fikarohana. Rehefa niara-niasa tamin'ny angon-drakitra nangonina ho an'ny tanjona hafa ankoatra ny fikarohana, ny olana ny fanamboarana kery dia sarotra kokoa (Lazer 2015) .
Rehefa mamaky ny fikarohana taratasy, iray haingana sy mahasoa fomba hijery olana momba ny fanamboarana manan-kery dia ny maka ny lehibe milaza ao amin'ny taratasy, izay matetika miseho amin'ny resaka constructs, ary indray maneho azy io eo amin'ny lafiny amin'ny tahirin-kevitra ampiasaina. Diniho, ohatra, roa kidaladalan'ny fampianarana izay milaza mba hampisehoana fa marani-tsaina kokoa ny olona mahazo vola bebe kokoa:
Halalino ny 1: ny olona izay baolina tsara amin'ny Raven Progressive Matrices Test-a tsara nianatra fitsapana ny analytic tsaina (Carpenter, Just, and Shell 1990) -have nitatitra ambony fidiram-bola eo amin'ny hetra
Fianarana 2: ny olona ao amin'ny Twitter, izay nampiasa intsony ny teny no azo inoana kokoa ho lazaina intsony marika lafo vidy
Amin'ireo tranga roa ireo, mpikaroka afaka milaza fa izy ireo dia nampiseho fa marani-tsaina kokoa ny olona mahazo vola bebe kokoa. Nefa, ao amin'ny fianarana voalohany ny ara-constructs tsara operationalized ny tahirin-kevitra, ary ao amin'ny faharoa lany ritra ireny. Koa, tahaka ity mampiseho ohatra, tahirin-kevitra kokoa ny tsy tonga dia mamaha olana amin'ny fanamboarana kery. Tokony misalasala ny vokatry ny Fianarana 2 na tafiditra bitsika iray tapitrisa, ny arivo tapitrisa bitsika, na iray tapitrisa tapitrisa bitsika. Fa mpikaroka tsy tsara ny hevitra ny fanamboarana kery, Table 2.2 dia manome ohatra ny fampianarana izay efa operationalized teorika constructs soritry nomerika mampiasa tahirin-kevitra.
Table 2.2: Ohatra ny nomerika soritra izay ampiasaina ho fepetra ny saro-takarina kokoa teorika hevitra. Ara-tsosialy ny mpahay siansa hoe lalao ity Manambatra kery ary izany dia fanamby lehibe amin'ny fampiasana loharanom-baovao lehibe ho an'ny angon-drakitra fikarohana ara-tsosialy (Lazer 2015) .
mailaka hazo avy amin'ny anjerimanontolo (Meta-angona ihany) ny fifandraisana ara-tsosialy Kossinets and Watts (2006) , Kossinets and Watts (2009) , De Choudhury et al. (2010)
haino aman-jery sosialy ao amin'ny Weibo Lahatsoratra Civic andraikitra Zhang (2016)
mailaka hazo avy amin'ny mafy (Meta-tahirin-kevitra sy feno soratra) Ara-kolontsaina mety hatao ao amin'ny fikambanana Goldberg et al. (2015)
Na dia ny olana ny tsy feno ho an'ny angon-drakitra operationalizing constructs teorika dia somary sarotra ny hamaha, misy telo vahaolana iraisana ho amin'ny olana ny isan'ny mponina tsy feno vaovao sy ny tsy feno vaovao momba ny fitondran-tena eo amin'ny sehatra hafa. Ny voalohany dia ny tena hanangona ny angon-drakitra ilainao; Hilaza aminao aho ny momba ohatra izany tao amin'ny Toko faha 3, rehefa lazaiko aminareo momba ny fanadihadiana. Indrisy anefa, io karazana fanangonana antontan'isa dia tsy azo atao foana. Ny vahaolana lehibe faharoa dia ny hanao izay angon-drakitra mpahay siansa hoe mpampiasa-toetra inference ary inona no ara-tsosialy ny mpahay siansa hoe imputation. Ao amin'io fomba, mpikaroka mampiasa ny vaovao izay ananany amin'ny olona sasany mba infer toetra ny olon-kafa. Ny vahaolana mety fahatelo-ilay nampiasain'i Kossinets sy Watts-dia ny manambatra ny loharanom-baovao maro angon-drakitra. Izany dingana izany dia antsoina hoe Nampitambatra indraindray na ny firaketana an-tsoratra linkage. Ny toerana tena fanoharana ho an'ny dingana izany dia nanolo-kevitra ao amin'ny andininy voalohany indrindra ao amin'ny taratasy voalohany indrindra hatramin'izay voasoratra ao rakitsoratra linkage (Dunn 1946) :
"Olona tsirairay eto amin'izao tontolo izao miteraka bokin'ny fiainana. Izany dia manomboka amin'ny fahaterahana Book ary mifarana amin'ny fahafatesana. Ny pejy natao ny fitadidiana ny zava-nitranga toro lalana eo amin'ny fiainana. Record linkage no anarana nomena ny dingana mivory ny pejy amin'ity boky ity ho boky. "
Io andalan-teny dia nosoratana tamin'ny 1946, ary tamin'izany andro izany, ny olona no mieritreritra fa ny bokin'ny fiainana mety ahitana zava-mitranga amin'ny fiainana lehibe toy ny fahaterahana, ny fanambadiana, ny fisaraham-panambadiana, ary ny fahafatesana. Na izany aza, ankehitriny, fa be dia be momba ny olona vaovao no voarakitra, ny bokin'ny fiainana mety ho mampino tsipiriany Mombamomba ny mpanoratra, raha toa ireo hafa pejy (izany hoe, ny niomerika soritra), dia azo niara-nafatotra. Ity bokin'ny fiainana mety ho loharano lehibe ho an'ny mpikaroka. Nefa, ny bokin'ny fiainana mety koa hoe ny base de données ny rava (Ohm 2010) , izay azo ampiasaina ho an'ny isan-karazany ny unethical tanjona, araka ny voalaza bebe kokoa etsy ambany rehefa miresaka momba ny saro-pady toetra ny vaovao voaangona ny lehibe angon-drakitra loharanom-baovao etsy ambany ary tao amin'ny Toko 6 (Mifehy).